हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रतको व्रतकथा - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रतको व्रतकथा
जसले विधिपूर्वक यस एकादशीको व्रत गर्दछ, त्यो सबै पापबाट मुक्त भई स्वर्गलोकमा पुगी चन्द्रमा-समान प्रकाशित हुने अवसर पाउँछ र यशप्राप्ति हुन्छ ।
यस हरिपरिवर्तिनी एकादशी चान्द्रमासको भाद्रमहिनाको शुक्लपक्षमा पर्दछ । यस एकादशीलाई जयन्ती एकादशी र वामन एकादशी पनि भनिन्छ । यसको निष्ठापूर्वक व्रत लिनाले वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुने बताइएको छ । पापीहरूले पापनष्ट होस् भन्ने कामनाले यस व्रतको सम्पादन गर्ने गर्दछन्, प्रायश्चित्तका लागि यो व्रतभन्दा ठूलो अर्को कुनै उपाय छैन ।पद्मपुराणको एउटा प्रसङ्गमा भगवान् श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको संवादका क्रममा यस व्रतको कथा र महात्म्य उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस क्रममा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नु भएको छ – जसले यस एकादशीका दिन मेरो वामनावतारको पूजा गर्दछ, त्यसले तीनै लोकमा सम्पदा र प्रतिष्ठा प्राप्त गरी पूज्य हुने अवसर प्राप्त गर्नपुग्छ ।
त्यसैले मोक्षको इच्छा राख्ने मनुष्यले यस हरिपरिवर्तिनी एकादशीको व्रतलाई विधिपूर्वक लिनु पर्दछ ।
भगवान् श्रीकृष्णका यस्ता वचन सुनेपछि युधिष्ठिरले सोध्नुभयो – हे भगवन् ! भाद्रपद शुक्लपक्षको एकादशीको नाम के हो? यसको विधि तथा माहात्म्य कस्तो छ ? कृपा गरी आज्ञा गर्नुहोस् । राजा युधिष्ठिरका जिज्ञासालाई शान्त बनाउने उद्देश्यले भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो – पुण्य, स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्ने तथा संपूर्ण पाप नाश गर्ने, उत्तम परिवर्तिनी एकादशीको माहात्म्य म हजुरलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् । भाद्रपद महिनाको शुक्लपक्षमा पर्ने एकादशीका दिन जसले कमलनयन भगवान् विष्णुलाई कमलको फूलले पूजा गर्दछ, ऊ वैकुण्ठलोकमा पुग्दछ । यस दिन व्रत र पूजा गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मा, विष्णु र शिवसहित तीनै लोकको पूजा गरेसरह फल प्राप्त गरेको ठहरिन्छ। अत: आजको एकादशीको व्रत अवश्य गर्नु पर्दछ। आजका दिन आषाढ शुक्लपक्षको हरिशयनी एकादशीमा क्षीरसागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुहुने भगवान् विष्णु निद्रित अवस्थामा नै कोल्टे फेर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसैले यस एकादशीलाई परिवर्तिनी एकादशी भनिएको हो।
भगवान् श्रीकृष्णका सुमधुर वाणी सुनेर युधिष्ठिरले फेरि सोध्नुभयो हे भगवन् ! मलाई तपाईं कसरी सुत्नु हुन्छ र कसरी कोल्टे फेर्नु हुन्छ भन्ने कुरामा जिज्ञासा जागेको छ र वामन रूपमा अवतरित भई के-के लीला गर्नुभयो? भन्ने विषयमा समेत जान्ने इच्छा जागेको छ । मेरा यी कानलाई पवित्र तुल्याइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । युधिष्ठिरका यस्ता जिज्ञासा सुने पछि श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभयो- हे राजन् ! अब तपाई सबै पापलाई नष्ट गर्ने भएको कथाको श्रवण गर्नुहोस।
त्रेतायुगमा बलि नामक एउटा दैत्य थियो। त्यो मेरो परम भक्त थियो । विविध प्रकारका वेद सूक्तहरूद्वारा मेरो पूजन गर्ने गर्थ्यो र नित्यप्रति ब्राह्मणहरूको पूजन तथा यज्ञको आयोजना गर्दथ्यो, तर इन्द्रसित द्वेष भएका कारण उसले इन्द्रलोक तथा सम्पूर्ण देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको थियो। देवताहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि चिन्तित भए र सबै एकत्र भई गहन छलफलपछि म भएको स्थानमा आए । बृहस्पतिसहित इन्द्रादिक देवता प्रभुका नजिकै गई नतमस्तक भएर वेदमन्त्रद्वारा मेरो पूजा र स्तुति गर्न थाले । देवताहरूको कल्याणका लागि बलिलाई बलहीन तुल्याउन मैले वामन रूप धारण गर्नुपर्यो, यो मेरो पाँचौ अवतार थियो, मैले वामनअवतार लिई ऋषि कश्यप र देवी अदितीको पुत्रका रूपमा स्वर्गका राजा इन्द्रको भाइ अनुजका रूपमा छल गरी राजा बलिलाई जितें। बलिले तिनै लोक र चौधै भुवनमाथि आफ्नो अधिकार जमाएको थियो, उसमा ठूलो अहङ्कार र घमण्ड भरिएको थियो, सम्पत्तिको मादकता देखिन थालेको थियो । यस्तैमा उसले एउटा ठूलो यज्ञको आयोजना गरी गरीबगुरुवा र ब्राह्मणलाई इच्छामाफिकको दान गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । यसै अवसरमा मैले वामन रूपधारी ब्रह्मचारी भएर राजा बलिसित तीन पाइला भूमि भिक्षा मागें ।
बलिले जम्मा तीन पाइलामात्र मागेको देखेर त्यसलाई तुच्छ ठान्दै अझ धेरै माग गर्न प्रार्थना गर्यो, तर मैले उसलाई भनें – यो तीन पाइला जमिन मेरा लागि तीनै लोकसमान हुनेछ, हे राजन ! तिमीले त्यत्ति जमिन दान गर्न प्रतिबद्ध भए पुग्छ । राजा बलिका लागि यो कुरो सामान्य थियो, याचनाको रहस्य खोतल्ने सोच नै नराखी उसले कुश, तिल र पानी समातेर सङ्कल्प गर्न आँट्यो, बलिका गुरु शुक्राचार्यले मेरो याचनाको रहस्य ध्यानदृष्टिले थाहा पाए, उनले सङ्कल्प पूरा गर्न आँटेको बलिलाई रोक्न खोजे, उनी आफ्ना यजमानको बचाउ गर्न चाहन्थे, तर बलिको घमण्डका कारण बुद्धिभ्रष्ट भैसकेको थियो, ऊ सङ्कल्पबाट पछि हटेन, र मलाई तीन पाइला जमिन दान गर्ने सङ्कल्प गरी छाड्यो । सङ्कल्पको कुश समात्नासाथ मेरो पालो मैले ठूलो रूप धारण गर्न थालें, मेरो यस रूपले तीनलोक र चौधै भुवनलाई ढाक्यो ।
मेरो यस स्वरूपलाई त्रिविक्रम भन्ने गरिन्छ । मेरो यस त्रिविक्रम स्वरूपले भूलोकमा पद, भुवर्लोकमा जङ्घा, स्वर्गलोकमा कम्मर, मह:लोकमा पेट, जनलोकमा हृदय, यमलोकमा कण्ठको स्थापना गरी सत्यलोकमा मुख, त्यस माथि आफ्नो मस्तक स्थापित गर्यो । यस स्वरूपलाई सूर्य, चन्द्रमा आदि सबै ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इन्द्रादिक देवता र शेष आदि सबै नागगणले विविध प्रकारले वेद सूक्तद्वारा प्रार्थना गरे। अनि मैंले राजा बलिको हात समातेर भनें- हे राजन् ! एक पदद्वारा पृथ्वी, अर्कोद्वारा स्वर्गलोक पूर्ण भयो, अब तेस्रो पाउ कहाँ राखौं ? त्यस पछि बलिले आफ्नो शिर झुकायो र मैंले आफ्नो खुट्टा उसको मस्तकमा राखिदिएँ अनि मेरो त्यो भक्त पाताललोकमा गयो। उसको बिन्ती र नम्रता देखेर मैंले भने हे बलि ! म सदैव तिम्रा नजिकै
बस्नेछु । विरोचनका पुत्र बलिले अनुरोध गरेपछि भाद्रपद शुक्ल एकादशीका दिन बलिको आश्रममा मेरो प्रतिमा स्थापित भयो । त्यसैले आजको एकादशीमा मेरो वामन र त्रिविक्रम रूपको पूजा र भक्तिको महत्त्व बढेको हो ।
त्यस्तै मनुष्यलोकको एक वर्ष मेरालागि एकदिन बराबर हुन्छ । उत्तरायणमा पर्ने ६ महिना मेरो दिवाकाल हो भने दक्षिणायनका ६ महिना मेरा लागि रात्रीकाल हुन्छ। प्रत्येक वर्षको आषाढ शुक्लको हरिशयनी एकादशीमा क्षीरसागरको माझमा शेषनागको पिठ्यूँमा शयन गरी कार्तिक महिनाको शुक्लपक्षमा पर्ने हरिप्रबोधिनी एकादशीमा मेरो निद्रा पूर्ण हुने गर्दछ। मेरो शयनकालको आधा भाग आजको एकादशीमा पूर्ण हुन्छ र निद्रित अवस्थामा नै म कोल्टे फेर्ने गर्दछु, त्यसैले आजको एकादशीलाई हरिपरिवर्तिनी एकादशीसमेत भन्ने गरिन्छ । सारांशमा आजका दिन तीनै लोकका स्वामी भगवान् विष्णुको पूजा गर्नु पर्छ। ताँबो, चाँदी, चामल र दहीको दान गर्नु उचित हुन्छ। रात्रिका समयमा जागरण गर्नुपर्छ ।
जसले विधिपूर्वक यस एकादशीको व्रत गर्दछ, त्यो सबै पापबाट मुक्त भई स्वर्गलोकमा पुगी चन्द्रमा-समान प्रकाशित हुने अवसर पाउँछ र यशप्राप्ति हुन्छ । रूपलावण्य र कान्तिमा कमजोरी देखिएका किशोरीहरूले आजको एकादशीको व्रत लिएमा वा रूपलावण्य र सौन्दर्यमा कमी नआओस् भन्ने कामना भएका स्त्रीले समेत आजको व्रत लिएमा तिनको शारीरिक सौन्दर्यमा अझ निखार आउँछ । जसले पापनाशक यस कथालाई पढ़ने वा सुन्ने कर्म गर्दछ, त्यसले समेत एक हजार अश्वमेध यज्ञ गरेसरह प्राप्त गर्दछ ।
दशैको टीकाको साइत असोज २१ गते बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा